Ngaba oopopayi kwii-imeyile bayasebenza ngokwenene? | Martech Zone
Unemizuzwana engama-30 yokubamba abafundi bakho xa bethe bacofa kwi-imeyile yakho. Ngokuqinisekileyo le iwindow encinci. Ukuba ufana nam, unokucinga ukuba oopopayi Kuyingozi ukuyisebenzisa kunye nentengiso ye-imeyile, kodwa ufuna ukutsala umdla wabamkeli bakho. Ke ngoku wenzantoni?
Nangona kunjalo, emva kokudlula intengiso yethu ye-imeyile Isilumkiso somxhasi esixhasayo, esi inokuba sisixhobo esihle kubathengisi be-imeyile ukuba sibandakanyiwe ngokufanelekileyo.
Ayisiyoopopayi kuphela indlela elungileyo yokubamba ingqalelo yabafundi, kodwa ikwavumela abathengisi ukuba batsalele ingqalelo kwiimveliso ezininzi, ukubonelela, okanye ukufowunela isenzo. Kuya kufuneka ungavumeli oopopayi bachaphazele ukuhanjiswa kwakho. Gcina ubungakanani boopopayi buncinci, gcina oopopayi be-GIF kwiifreyimu ezi-6 kuphela, kwaye uqiniseke ukuba isakhelo sokuqala sifaka umyalezo (ukuba ukhona) ukuze ii-imeyile zakho zingabinangxaki ekubanjweni kwifolda yeSpam.
Ukufumana ezinye iingcebiso zokuyila kunye nokuhambisa oopopayi kwi-imeyile yakho, jonga i-Delivra's Oopopayi kwii-imeyile: Ungayifaka njani ngokufanelekileyo le ndlela yaMva.
Khuphela iPhepha leNgcacisonkqubo!
tags: oopopayiUmxholo we-imeyileemail MarketingkwababhaliseleWhitepaper